सीले नेपालको भ्रमण गर्नु नै ठूलो कुरो हो – Maitri News
सीले नेपालको भ्रमण गर्नु नै ठूलो कुरो हो
Mohan Bastola October 17, 2019
चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङको नेपाल भ्रमणलाई प्रमुखप्रतिपक्षी दल काँग्रेसले पनि सकारात्मक रुपमा लिएको छ । काँग्रेसका युवा नेता धनराज गुरुङ सीको भ्रमणलाई सकारात्मक रुपमा लिन्छन् । गुरुङसँग मोहन बास्तोलाले गरेको कुराकानीः
सीको नेपाल भ्रमणलाई कसरी लिनुभएको छ ?
चिनियाँ राष्ट्रपति सबै नेपालीको पाहुनाका रुपमा आउनुभयो । हामीले इतिहासतिर फर्किएर हेर्ने हो भने पनि हामीले करीब २३ वर्षदेखि यस्तो उच्चस्तरको भ्रमण चिनियाँ नेताहरुबाट प्राप्त गरेका थिएनौँ । हामी यस्तो खालको भ्रमण होस भन्ने चाहन्थ्यौँ । तर त्यो पूरा भने हुन सकेको थिएन । यो पटक यो पूरा भएको छ । सबै भन्दा खुशीको कुरा नै यहि हो ।
उहाँको यो भम्रणले साच्चो अर्थमा भन्ने हो भने नेपालको राजनीतिमा पनि एक प्रकारको सद्भावना जगाएको छ । दुई देश बीचको सम्वन्धलाई अझ प्रगाढ बनाउन पनि उहाँको यो भ्रमणले भूमिका खेलेको छ । त्यो सँगै उहाँको यो भ्रमणले उत्साह थपेको छ र सबै राजनीतिक दलबीच मेलमिलाप गरेर समृद्धिको दिशामा अघि बढ्न पनि थप प्रेरणा मिलेको छ । उहाँले नेपालका सबै राजनीतिक दल मिलेर समृद्धिको दिशामा अघि बढ् भन्ने सन्देश पनि दिनुभएको छ ।
उहाँले चीनको भूमि प्रयोग गरेर नेपाल आएको भए हुन्थ्यो भन्ने पनि छ नि ?
सी चिनफिङ नेपालको औपचारिक भ्रमणमा आउनु भएको हो । सबै भन्दा ठूलो विषय नै यही हो । कुन बाटोबाट आउनु भयो ? कुन जहाज प्रयोग गर्नुभयो भन्ने त झिना–मसिना विषय हुन् । यो कुनै एजेण्डा नै होइन । महामहिम राष्ट्रपति २३ वर्षपछि नेपालमा चीनका तर्फबाट उच्चस्तरको औपचारिक भ्रमणका लागि नेपाल आउनु भयो । सबै भन्दा महत्वपूर्ण कुरा चाँहि यही हो । यो नै नेपालका लागि ठूलो उपलब्धी हो । हामीले यसरी हेर्नुपर्छ ।
प्रमुखप्रति दललाई पनि समान महत्व सीले दिएको भन्ने चर्चालाई चाँहि कसरी बुझ्ने ?
निश्चय पनि उहाँले प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेतालाई समेत भेटेर जुनका खालको महत्व दिनुभएको छ । यो सकारात्मक छ । उहाँ नेपाल भ्रमणमा आएका बेला सत्तापक्ष प्रतिपक्ष कसैलाई पनि नछुटाइकन भेट गर्नुभएको छ । यो उहाँले नेपालका राजनीतिक दललाई मेलमिलाको राजनीति अंगालेर अघि बढ्नुहोस भन्ने सन्देश दिन चाहेको प्रष्ट हुन्छ । उहाँले सोही बमोजिमको व्यवहार पनि देखाउनुभयो । उहाँको नम्र व्यवहार प्रस्तुत गर्नुभयो । त्यो त हामीले विभिन्न सञ्चार माध्ययमबाट पनि त देख्यौँ नि । त्यसैले उहाँले नेपालका नेताहरुलाई जसरी अत्यन्तै सकारात्मक सन्देश दिएर जानु भएको छ । यो सन्देश नेपालका राजनीतिक दलहरुले पनि ग्रहण गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लागेको छ । यो नेपाल र नेपालीका लागि पनि हितकर करा हो र समृद्धिको यात्रालाई अघि बढाउने अवसर पनि हो ।
सीको स्वागत अलिक बढी नै भयो भन्ने पनि छ नि ?
मलाई त्यस्तो लाग्दैन । पाहुना आउँदा पाहुनालाई स्वागत गर्नु त नेपालीको संस्कार नै हो । त्यो त हाम्रो परम्परा पनि हो । अतिथि सत्कार गर्ने कुरा हाम्रो परम्परा र संकार र संस्कृति पनि भएकाले यसलाई अनौठौ रुपमा लिनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्दैन । त्यसैले घरमा आएको पाहुना होस या देशमा आएको पाहुना होस् उसलाई सत्कार गर्नु कुनै अनौठो कुरा नै भएन नि ।
हामीले घरमा आएको पाहुनालाई पनि त आफूले नमिठो खाँदा पनि पाहुनालाई चाँहि मिठो खान दिन्छौँ । सफा–सुघर गर्र्छौ । आफू सुकुलमा सुतेर भए पनि पाहुनालाई अलिक राम्रो विस्तारामा सुताउने त हाम्रो संकार नै हो । त्यसैलेले यो कुनै अनौठो कुरा हो जस्तो लाग्दैन । फरी सी कम्युनिष्ट पार्टीको मात्र पाहुना होइन । उहाँ देशको पाहुना भएर आउनु भएको हो । उहाँलाई कम्युनिष्ट पार्टीले मात्र होइन देशले नै आथित्यता गरेको हो । उहाँको आथित्यतामा गरिएका कामलाई नकारात्मक रुपमा हेर्नुपर्ने आवश्यकता नै छैन । नेपाल एउटा घर हो । यो घरमा चीन जस्तो ठूलो घरबाट ठूलो पाहुना हाम्रो झुपडीमा आउँदै गर्दा उहाँको सत्कार गर्नु अवश्य पनि राम्रो कुरा हो । त्यसैले हामीले उहाँ आउँदा धेरै तामझामका साथ सिँगारपेटार गरियो भनेर कोकोहोलो गर्नुपर्छ जस्तो पनि लाग्दैन । म एक पटक फेरि भन्छु– उहाँ कम्युनिष्ट पार्टीको मात्रै निमन्त्रणामा नेपाल आउनु भएको होइन । उहाँ नेपालको राष्ट्रपतिको निमन्त्रणामा देशको पाहुना बनेर नेपाल आउनु भएको हो । यो भन्नु भनेको उहाँ एउटा पार्टीको पाहुना होइन । उहाँ हामी सबै नेपालीको पाहुना हो । हामीले यसकारण पनि फराकिलो दृष्टिकोणबाट उहाँको नेपाल भ्रमणलाई हेर्नुपर्छ । उहाँ नेपालको दुई दिनको औपचारिक भ्रमण पूरा गरेर स्वदेश फर्किने बेलासम्मको अवस्थालाई हर्ने हो भने हामीले उहाँको सत्कार पनि त्यहि ढंगले गरेका छौँ । हाम्रो आथित्यताबाट अवश्य पनि उहाँ सन्तुष्ट हुनुहुन्छ भन्ने मैले र मेरो पार्टीले पनि विश्वास लिएको छ । हामीले आथित्यका लागि जे गर्नुपर्ने हो गरेका छौँ ।
सीको सन्देश के–हो जस्तो लाग्छ ?
उहाँले जाने बेलामा पनि भन्नुभएको छ । धेरै नबोल्नुहोस् काम गरेर देखाउनुहोस् । हामी नेपालीहरुको बढी बोल्ने बानी छ । उहाँ हाम्रो त्यो बानीबाट जानकार भए जसरी नै निकै सटिक रुपमा उहाँले कम बोल, धेरै काम गर भनेर जानुभएको छ । हामीले सीबाट यति मात्रै सिक्न सक्यौँ भने पनि त्यो नेपालका लागि ठूलो उपलब्धी हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ । उहाँले अर्को कुरा पनि भन्नुभएको छ । सुरु गरेको काम पूरा गरेर मात्रै छाड्नुहोस् । चीनले पनि यसै गरिरहेको छ । यो कति मार्मिक कुरा छ । नेपालका राजनीतिक दलले यो कुरालाई मनन् गर्नुपर्छ । यति भए पुग्छ । हामी गफमा बढी विश्वास गर्ने भएकाले धेरै समस्या भएको छ । ऊर्जा, जलस्रोत, पूर्वाधार विकास सबै कुरामा हामीले हेर्ने हो भने हामीले गफ बढी काम निकै कम गरेका छौँ । यसबाट माथि उठ्नुपर्छ ।
Previous Previous post: नेकपाको चियापान समारोह : आर्थिक विकासका लागि त्रिदेशीय साझेदारीको रणनीतिक आधार तयार हुँदै
Next Next post: विप्लव समूहका कमाण्डर चन्द्रबहादुरसहित २१ नेता पक्राउ